(Taylor Swift မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
This ဆောင်းပါး may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this ဆောင်းပါး if you can. The talk page may contain suggestions. (၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈)
မွေးသက္ကရာဇ် (1989-12-13) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၁၉၈၉ (အသက် ၂၉)
တေလာဆွစ်ဖ် (အင်္ဂလိပ်: Taylor Alison Swift) သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား တေးရေး၊တေးဆို တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည်ငယ်စဉ်က Wyomissing, Pennsylvania တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး အသက် ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ်တွင် ကျေးလက်ဂီတ လောကသို့ဝင်ရောက်ရန် Tennesseeပြည်နယ် Nashvilleမြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Big Machineကုမ္ပဏီ နှင့် စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး Sony/ATV တေးသံသွင်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်သော အငယ်ဆုံးသီချင်းရေးသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ Swiftသည် သူ၏ ပွဲဦးထွက် Taylor Swift အမည်ရှိအယ်လ်ဘမ်ဖြင့်ပင် အထူးအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်မှတတိယမြောက်ထွက်ရှိသော single ဖြစ်သည့် Our Song အမည်ရှိသီချင်းဖြင့် ကျေးလက်သီချင်းစာရင်းတွင် ပထမချိတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး လက်သစ်အဆိုတော်ဆုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
သူ၏ ဒုတိယအယ်လ်ဘမ် Fearless သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ Pop ဂီတအငွေ့အသက်များရောနှောထားသော Love Story နှင့် You Belong With Me သီချင်းများ၏ အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Fearless အယ်လ်ဘမ်သည်လည်း ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွက် U.S တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအယ်လ်ဘမ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်သည် ၂၀၁၀ခုနှစ် ၅၂ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲတွင် အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်သော တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးတေးအယ်လ်ဘမ်ဆု (Album of the Year) ကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုဆုကိုရရှိချိန်တွင် တေလာသည် အသက်၂၀သာရှိသေးပြီး တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးတေးအယ်လ်ဘမ်ဆုကို အသက်အငယ်ဆုံးနှင့်ရရှိသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Fearless အယ်လ်ဘမ်သည် Grammy ဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံးကျေးလက်တေးဂီတအယ်လ်ဘမ်ဆု နှင့် White Horse သီချင်းက ဆုနှစ်ဆုထပ်မံရရှိခဲ့ကာ စုစုပေါင်းဆုလေးဆုရရှိခဲ့သည်။ တတိယအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Speak Now အယ်လ်ဘမ်သည်လည်း စတင်ရောင်းချသည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာပင် အချပ်ရေ ၁ သန်းကျော် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းအယ်လ်ဘမ်ရှိ Mean သီချင်းဖြင့် Grammy ဆု နှစ်ခုထပ်မံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သူ၏ စတုတ္ထမြောက် အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Red အယ်လ်ဘမ် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ယင်း အယ်လ်ဘမ်မှာ စတင်ရောင်းချသည့် တစ်ပတ်အတွင်း ချပ်ရေ ၁.၂ သန်းကို စံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်ရှိ We Are Never Getting Back Together နှင့် I Knew You Were Trouble တို့မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အထူးအောင်မြင်ခဲ့သည်။
Taylor Swift က သူ၏သီချင်းများတွင် ကိုယ်တွေ့အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းရေးသားလေ့ရှိသည်။ သူ့အား Nashville တေးရေးသူများအစည်းအရုံးနှင့် the Songwriters Hall of Fame တို့ကလည်း ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ Swift သည် Grammyဆု ဆယ်ဆု၊ Billboard တေးဂီတဆု တစ်ဆယ့်နှစ်ခု၊ ကျေးလက်တေးဂီတ အဖွဲ့အစည်းမှချီးမြှင့်သောဆု တစ်ဆယ့်တစ်ခု နှင့် ကျေးလက်တေးဂီတ အကယ်ဒမီဆု ခြောက်ဆုတို့ကို လက်ခံရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ယနေ့အချိန်အထိ အယ်လ်ဘမ်အချပ်ရေ ၂၆သန်းကျော် ရောင်းထွက်ခဲ့ခြင်းကလည်း သူ့အား သီချင်းခွေဝယ်လိုအားကောင်းသော အဆိုတော်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်စေခဲ့သည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်းက သူ၏ ငွေကြေးချမ်းသာမှုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၂၂၀ ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ Taylor Swiftသည် တေးဂီတနယ်ပယ်တွင်သာမက ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာပါ မင်းသမီးတစ်ဦးအနေဖြင့်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၁၀ခုနှစ်က ရိုက်ကူးသော ဟာသရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည့် Valentine's Day ရုပ်ရှင်တွင် Felicia Miller အဖြစ်လည်းကောင်း ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိသော The Lorax ဟူသည့် ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွင် အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ Swiftသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော အနုပညာကျောင်း၊ ကလေးသူငယ်များ စာအရေးအဖတ်တတ်မြောက်ရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ LGBT anti-discrimination (လိင်တူချစ်သူများအား ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး)နှင့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သော ကလေးသူငယ်များအတွက် အကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် တေလာသည် Nashville မြို့ရှိ Bluebird Cafe ၌ပြုလုပ်သော Showcase ပွဲတွင် Big Machine အမည်ရှိ ကိုယ်ပိုင်တေးသံသွင်းကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ရန်ပြင်ဆင်နေသော Dreamworks Records ၏ အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Scott Borchetta ၏အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။ တေလာသည် Big Machine ကုမ္ပဏီနှင့် အစောဆုံးစာချုပ်ချုပ်ခဲ့သူများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ တေလာ၏အဖေသည် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိသော Big Machine ၏ ရှယ်ယာ၃ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ တေလာသည် Big Machine နှင့် စာချုပ်ချုပ်ပြီးများမကြာမီမှာပင် သူ့နာမည်ကိုအစွဲပြု၍မှည့်ထားသော တေလာဆွစ်ဖ် အယ်လ်ဘမ်ကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် သူနှင့်ထူးခြားသောအဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုခံစားမိသော တေးဂီတထုတ်လုပ်သူ Nathan Chapman ကို သူ့အတွက်ငှားပေးရန် Big Machine ကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ တေလာသည် အယ်လ်ဘမ်ထဲမှသီချင်းသုံးပုဒ်ကို တစ်ဦးတည်းရေးသားခဲ့ပြီး ကျန်ရှစ်ပုဒ်ကို Liz Rose၊ Robert Ellis Orrall၊ Brian Maher နှင့် Angelo Petraglia ကဲ့သို့သောတေးရေးများနှင့် ပူးပေါင်းရေးသားခဲ့သည်။ တေလာဆွစ်ဖ် ကို ၂၀၀၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ The New York Times ဂျာနယ်ကြီး၏ဝေဖန်ရေးဆရာ Jon Caramanica က "ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာ တေလာရဲ့ခိုင်မာပြီးကြင်နာစရာကောင်းတဲ့အသံနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ အံ့ဩစရာကောင်းပြီး အပြစ်ရှာစရာမရှိတဲ့ Pop အငွေ့အသက်တွေနဲ့ Country ဂန္တဝင်လက်ရာလေးပါ" ဟုချီးကျူးခဲ့သည်။ တေလာဆွစ်ဖ် သည် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဩဂုတ်လအရောက်တွင် အချပ်ရေပေါင်း ၇.၇၅သန်း ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တေလာ_ဆွစ်ဖ်&oldid=461932" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇွန် ၂၀၁၉၊ ၀၄:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။